REMME: hanaisotra ny logins sy ny teny miafina ve i Blockchain? | Martech Zone
Alakamisy 22 martsa 2018 Alakamisy 22 martsa 2018 Douglas Karr
Iray amin'ireo teknolojia manaitaitra kokoa ny blockchain. Raha mila topy maso momba ny teknolojia blockchain ianao - vakio ny lahatsoratray, Inona no atao hoe Technology Blockchain. Androany, sendra an'ity ICO ity aho, MIALA.
ICO dia fanolorana vola voalohany. Misy ny ICO rehefa misy manolotra mpamatsy vola ny singa sasany amin'ny cryptocurrency na crypto-token vaovao ho takalon'ny cryptocurrency toy ny Bitcoin na Ethereum, amin'ity tranga ity RemME
Araka ny voalazan'ny Forbes, ny vidin'ny heloka bevava amin'ny cyber dia hahatratra $ 2 tapitrisa tapitrisa amin'ny taona 2019. Ny ankamaroan'ireo fanitsakitsahana ireo dia mitranga amin'ny alàlan'ny fanafihana mahery vaika amin'ny anarana mpampiasa sy teny miafina. Ny haitao REMME dia mahatonga ny tenimiafina ho lany andro, manafoana ny maha-olombelona ny fizotran'ny fanamarinana. Ity misy horonantsary topimaso:
Ary mbola manohy mahita orinasa lehibe voahitsakitsaka ny angon-drakitry ny mpampiasa sy ny tenimiafiny rehetra izahay, manome fitaovana ho an'ireo mpijirika mangalatra tahirin-kevitra marobe avy amin'ny tahiry tokana sy foibe. Miaraka amin'ny tahiry angona voazara, tsy mety hitranga izany - ka io no fomba azo antoka indrindra hitahirizana fampahalalana saro-pady.
miaraka MIALA, ny mpampiasa anao dia tsy mila mameno endrika na mila teny miafina lava sy sarotra. Fanamarinana amin'ny tsindry iray tsotra sy azo antoka fotsiny. Ary na izany tsindry izany aza dia azo ampifandraisina amin'ny fanamarinana roa.
REMME dia nanisy tsipiriany momba ny toetran'izy ireo:
Tsy misy foibe fanamarinana - Tsy ilaina ny foibe fanamarinana - fehezinao ny anjaranao. Miaraka amin'ny sakana manolo ny fahefa-piterahana dia mitahiry vola ny orinasanao ary lasa mahaleo tena kokoa.
Blockchains sy Sidechains - Ny rafitra RemME dia azo ampiasaina amin'ny blockchains sy sidechains maromaro. Azonao atao ny misafidy ny fampifangaroana mety indrindra ho an'ny orinasanao.
Fehezo ny momba anao - Ny lakilen'ny tenanao manokana dia, ary mijanona, ny tsiambaratelonao izay tsy mandao ny solosainanao. Fa kosa, ny taratasy fanamarinana RemME nosoniavin'ny fanalahidinao manokana dia afaka miasa ho lakilem-bahoaka ho an'ny tranokala na serivisy.
Ny mpampiasa dia afaka misoratra anarana amin'ny kaonty tsy manam-petra koa, izay manana mari-pankasitrahana SSL maro. Na oviana na oviana mandritra ny fidirana amin'ny fidirana dia afaka misafidy izay kaonty hampiasana izy ireo.
Midira amin'ny programa Pilot an'ny REMME
Tags: blockchainny tenimiafinaremmeanarana mpampiasa